Novela Negra, chiyero chakawandisa chemavara. | Zvazvino Zvinyorwa
Kubva Sherlock Holmes kuenda kuLisbeth Salander: Iyo yekuparwa mhosva inochinja.
Nyaya yematsotsi inomuka ne Edgar Allan Poe and the muchengeti Auguste Dupin mumigwagwa ye Paris nebhuku renhau rine musoro Mhosva dzemochari Street. Kubva ipapo nhoroondo yematsotsi yakashanduka, yakachinjika, yakaiswa munharaunda, yechikadzi, yakasarudzika uye yakatosvika padhuze nekutyisa. Zvikuru zvekuti kunyangwe ivo vanonyanya kufarira mhosva vaverengi havafarire ese masitayera.
Zvinoita here kuti Miss Marple, Philip Marlowe, Pepe Carvalho, Lisbeth Salander nevachengeti vehurumende vaviri Vila naChamorro vese ndevechikadzi chimwe chete? Zviri. Rudzi rumwe chete, akasiyana masitaera.
1 Kune vanonatsa: Classic Noir Novel.
2 Kune avo vanoenderana nenguva vasingarasikirwe netsika: Yemazuva Ano Nhema Nhau.
3 Kune zvekare zvekare: yeBritish isinganzwisisike nyaya.
4 Kune avo vanoongorora kwakamonyoroka pfungwa dzevanhu: Nordic Noir Novel.
5 Kune vatengesi: Detective novel.
6 Kune vanoda tsika dzekumabvazuva: Japan Noir Novel.
7 Kune avo vanonamata Iyo Indiscrete Window: Domestic Noir.
8 Kune avo vedu vanofarira kudya: Gastronomic Noir.
Kune vanonatsa: Classic Noir Novel.
American novel kubva kuma50s uye makumi matanhatu nemurume mutikitivha, murume akaoma akarohwa nehupenyu, vakadzi vakanaka uye vane hutsinye vakashungurudza protagonist uye nharaunda munzvimbo dzakadzika dzeguta hombe. Ndiina Sam Spade naDashiell Hammett naPhilippe Marlowe naRaymond Chandler seminondo yekutanga, kana kunyangwe wedu Pepe Carvalho naManuel Vázquez Montalbán, parizvino anopinda muboka reCormoran Strike, naRoberth Galbraith iyo isiri imwe zita idzva raJoanne Rowling rinozivikanwa vese vakaita saJK Rowling.
Kune avo vanoenderana nenguva vasingarasikirwe netsika: Yemazuva Ano Nhema Nhau.
Izvo, kana zvimwe kana zvishoma, iko kukwidziridzwa kwechikadzi, nemurume kana mukadzi mutikitivha uyo anoshanda ega kana mune kambani, asi nehupenyu hwekutambudzwa uye akagadzwa kungave pasi pevhu kana mune yakasarudzika uye yakashata uye yakaora nyika mari.yakanangana nekutyora mutemo uye kuremekedza vamwe vanhu, isu tinogadzira akawanda enganonyorwa dzazvino. Mumwe wevatungamiriri vevatsvagiri vechikadzi munhoroondo yematsotsi aive Sue Grafton nemutikitivha wake Kinsey Milhorne. MuSpain, pasina kupokana, wekutanga kuendesa nhoroondo yeAmerica yekuparwa mhosva kundima yedu mumaoko emuchengeti, anga ari Alicia Giménez Barlett naPetra Delicado. Mimwe mienzaniso yenyaya iyi ine chibhakera chikuru ndiVíctor del Árbol kana Leonardo Padura nemupurisa wake akafira kutenda, Mario Conde
Kune zvekare zvekare: yeBritish isinganzwisisike nyaya.
Mhondi dzine ropa shoma uye dzakagadziriswa nechero chinhu chehungwaru uye hunyengeri hwemuferefeti, hwakagadzwa mumafuremu akanaka, vane yavo huru rezita Agatha Christie, naPoirot, Miss Marple kana Tommy naTuppence uye, parizvino, muenzaniso wakanaka Iye. anozivikanwa saMukadzi Wekupara mhosva: Donna Leon nemutungamiriri wake Brunetti, muVenice isingaenzanisike.
Kune avo vanoongorora kwakamonyoroka pfungwa dzevanhu: Nordic Noir Novel.
Iyo Nordic mhosva inoverengeka inorarama nguva yayo inotapira. Akazvarwa muma60s neruoko rwaSjöwall naWahlöö uye muongorori wavo Martin Beck, boom yaHenning Mankel naInspector Walander uye kubudirira kwepasi rose kwaStieg Larson naLisbeth Salander, nhasi inomiririrwa nevanyori vakaita saJo Nesbro, Camila Lackberg na zvakanyanya, sezvo iri nzvimbo yakakura kwazvo murudzi urwu rwemanovel.
Humhondi humhondi uye tsananguro dzakajeka, nharaunda ine rima inofarirwa nemamiriro ekunze nenzvimbo yenharaunda, mashoma manzwiro kana manzwiro akanyanyisa, uye matikitivha echirume neechikadzi ane hupenyu hwekutambudzwa anoratidzira hunhu hweiyi subgenre.
Kune vatengesi: Detective novel.
Ndidzo dzinotarisa zvakanyanya panzira dzekutsvaga. Timu yemapurisa ine ma profiles akasiyana, anosanganisira vatongi neve forensics vanoongorora mhosva. Ndiyo mhando yakanyanya kuunzwa kuchiratidziri, iyo inokurudzira akateedzana senge CSI. Patricia Corwell kana Arthur Connan Doyle mienzaniso yerudzi urwu rwerudzi rwematsotsi uko kuferefetwa ndiko kiyi.
MuSpain, Esteban Navarro, mupurisa akarega basa, ndiye muenzaniso wakanakisa werudzi urwu. Mune enganonyorwa dzake tinogona kuzvitakura kuenda mukati mechipurisa uye nekubasa rezuva nezuva remapurisa: kubatana pamwe nevevarindi vehurumende, marekodhi, zvirevo ... ivo vanomisikidza zvinyorwa zvavo.
Kune vanoda tsika dzekumabvazuva: Japan Noir Novel.
Izvo zvakakodzera kurapa zvakasiyana nekuti, kunyangwe zvichinyanya kuzivikanwa muSpain kunyangwe hazvo iro reimwe renhau dema yeGetafe yakatsaurirwa kwariri, ine maficha akasarudzika.
Iko kushomeka kwekusaziva kwevatambi: Kutonhora uye kuverenga, havamboite sevasungwa veemanzwiro, nguva dzose kubva kuzororo uye kutonhora.
Mukugadzika kwenhau yeJapan, tekinoroji iri kwese kwese.
Iyo inogovera hutsinye neyakaomeswa yakabikwa, iyo yechinyakare yekuAmerican mhosva inoverengeka, izere nesikarudzi uye kusava netariro.
Sevabudisi venhau yeJapan yekuparwa kwemhosva, tinogona kutaura kubva kune akanyanya kudhindwa saSeishi Yokomizo, Haruki Murakami kana Yukio Mishima kuvanyori vazvino vakaita saNatsuo Kirino, Masako Tokawa, Miysuyo Kakuta.
Iyo yekuJapan yekuparwa kwemhosva inounza pachena hutsinye hwenyika yeTokyo.
Kune avo vanonamata Iyo Indiscrete Window: Domestic Noir.
Aya ndiwo enganonyorwa ehunyengeri anotiza kubva kuuraya mhondi, kwakanyanya psychopaths uye kutandara kwemhirizhonga. Mhosva dzinoitika kumba, mumhuri, izvo zvinoita kuti dziwedzere kutonhora. Ivo vanoongorora divi rinoshungurudza remhondi, zvinokurudzira kuuraya zvevanhuwo zvavo, ivo protagonists vanoongorora uye voongorora matambudziko avo vega uye vanopinda mukati memukati mematsotsi nevabatwa, vavariro uye kutambura kwavo. Kazhinji, muongorori haasi nyanzvi. Ivo ndivo vanotsanangudza rudzi urwu Steve (SJ) Watson, Roger Jon Ellory. MuSpain, Clara Tíscar, Lorena Franco naMaría José Moreno mienzaniso yakanaka.
Mukati meDomestic Noir mune iyo Grip Lit (kubata zvinyorwa zvinonakidza zvepfungwa), nekumwe kushushikana kwepfungwa, mune dzimwe nguva padhuze neruzivo rwerudo uye nevanyori vanonyora nezvevakadzi: Gillian Flynn naLost kana Paula Hawkings neMusikana paChitima ndivo vamiririri venyika zhinji.
Kune avo vedu vanofarira kudya: Gastronomic Noir.
Hatigone kurega kutaura nezve genre rakagadzirwa pamba, nemudikani wedu anodiwa chef uye director wehunyanzvi kuArzak, Xabier Gutiérrez, ne trilogy yake El Aroma del Crimen. Gastronomic noir hazvireve chete kuti zvinopa kubatidzwa kwekicheni kunhoroondo yekuparwa kwemhosva sezvakaitwa naStanley Gardner negweta rake risingakanganwiki Perry Mason, asi enganonyorwa dzakaiswa munyika yekubika.
Handizive kana vese vari ivo varipo, asi izvo zvandinogona kukuvimbisai kuti vese varipo, variko.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Nhema nhema » Novela Negra, chiyero chakawandisa chemagirizi.